Google oo Bilaabeysa dagaal ka dhan Alshabaab, Daaacish iyo kooxaha kale Mayalka adag | Xaqiiqonews
Google oo Bilaabeysa dagaal ka dhan Alshabaab, Daaacish iyo kooxaha kale Mayalka adag
Xilli uu socdo duulaanka ka dhanka ah ee lagula jiro kooxaha mayalka adag ee islaamiyiinta ayaa waxa ay shirkadda google soo saartay go,aan ayaa sheegeyso in kor loogu qaadaayola dagaalanka xagjirka.
Google ayaa sheegtay in ay sara u qaadi doonto in la tirtiro muuqaalada kooxaha xagjirka ay soo geliyaan Internet-ka waxaana sidoo kale Shirkaddu ay wacad ku martay in ay bogga internet-ka ka saari doonto dhamaan waxyaabaha la xariira jihaadka.
Shirkadda ayaa sheegtay in hadafkeedu uu yahay in la ilaaliyo in kooxahani afkaartooda ay ku baahiyaan Internet-ka waxaana la tiritiri doonoo waxyaabaha kooxahani ay soo geliyaan Internet-ka xitaaa hadii aysan aheyn dilal iyo madax goyn.
Google ayaa si howshani ay u fusho waxa ay shaqaaleysiin doontaa Injineero badan oo aqoon u leh tiknooljiyadda si sare loogu qaado la dagaalanka waxa ay ugu yeereen “ agigixsada”.
La taliye sare oo ka tirsan Google ayaa yiri” inkastoo aniga iyo dad badan oo saaxibadey ah aan in muddo ka shaqeyn jirnay sidii loo tiritiri lahaa muuqaalada xagjiriinta ayaa hadane runtu waxa ay tahay waxaa loo baahanyahay shaqo badan”
Google ayaa dagaal kula jira Islaamiyiinta waxaana uu qeyb ka yahay duulaanka mareekanka uu hogaaminaayo ee la magac baxay”La dagaalanka argigixisada” kaasi oo beegsanaya jamaacaadka jihaadiyiinta ah ee ka howlgala qaar ka mid ah wadamada islaamka.